Posted on May 01, 2016 | views: 358
Posted on May 01, 2016 | views: 499
८ बैशाख, काठमाडौं । विसं २००८ देखि २०७० सम्म प्रकाशित नेपाल राजपत्रलाई अब वेबसाइटमा पनि हेर्न सकिने भएको छ । http://www.dop.gov.np/gallery.php गई जानकारी लिन चाहेको जुनसुकै नेपाल राजपत्रलाई हेर...
शैक्षिक वर्षको सूरुवातसँगै जुहारी सुरु
७ बैशाख, भक्तपुर । नयाँ शैक्षिक वर्षको सूरुवातसँगै सरोकारवालाहरुबीच समन्वय हुन नसक्दा जुहारी चलेको छ । रफत सञ्चार क्लबले आज गरेको साक्षतकार कार्यक्रममा बोल्दै अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डार...
बिद्यालय भर्ना कार्यक्रम सुरु
२ बैशाख, काठमाडौं । हामी सबैको इच्छा सर्बसुलभ बिद्यालय शिक्षा भन्ने नाराका साथ सरकारले आजदेखी बिद्यालय भर्ना कार्यक्रम सुरु गरेको छ । २०६१ देखी अभियानका रुपमा संचालन गर्दे आए पनि यस पाली बिद्यालय ...
राम्रो पढ्नेलाई त्रिविले नै जागिर दिने
२८ चैत, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षामा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई दरबन्दीमै रोजगारी दिने भएको छ । विश्वविद्यालयले अब टपर विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयभित्रै उपप्राध्यापकको रोजगारी दि...
Posted on May 02, 2016 | views: 428
भक्तपुर,चैत २७ । जिल्लाको दूधपाटी–१७ मा रहेको लिटिल वल्र्ड माध्यामिक विद्यालयले आफ्ना दुई विद्यार्थी अमर र आयुषालाई ‘लिटिल वल्र्ड एम्बेस्डर’ छनोट गरेको छ । छात्रतर्फ कक्षा ६ मा अध्ययनरत अमरजंग थापा र...
एसएलसीमा ३९५ जनालाई कारबाही
२६ चैत, काठमाडौं । यसवर्षको एसएलसी परीक्षामा अनियमितता गर्ने ३९५ जनालाई कारबाही गरिएको छ । परीक्षा सम्पन्न भएपछि यसबारे जानकारी दिदै परीक्षा अबधीभर अनियमिता गर्ने ३२८ जना परीक्षार्थीलाई परीक्षाबाट...
विद्यार्थी श्रम शोषण बढेपछि विश्वविद्यालयले बिताब निकाल्यो
२४ चैत, टोकियो । आफ्ना विद्यार्थीमाथि श्रम शोषण बढेको भन्दै जापानको एक विश्व विद्यालयले छुट्टै पुस्तक प्रकाशित गरेको छ । टोकियोमा रहेको वासेडा विश्व विद्यालयले आफ्ना नयाँ विद्ययार्थीका लागी भनेर य...
काठमाडौ,चैत २४ । गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन उदेश्यका साथ राजधानीमा सञ्चालित तीन निजी विद्यालय गाभिएर एउटै भएका छन् । ‘धेरैबाट एक र त्यसभित्र मजबुतीको आधार’ खोज्ने नेपाल सरकारको समायोजन नीतिलाई आत्म...
प्रमिला सुनार-२१ चैत, त्रिशुली, नुवाकोट । विद्यालय तहको अन्तिम कक्षाको रुपमा रहेको प्रवेशिका अर्थात एसएलसी परीक्षा विद्यार्थीहरुले टहरामा नै बसेर दिएका छन् । भूकम्पको कारण घरबास गुमाएका विद्यार्थीहरु...
जेनेटिक ल्याब आगामी वैशाखबाट सुरु हुने
२१ चैत, काठमाडौं । सबै किसिमका वंशाणुगत रोगको सूक्ष्म परीक्षण गर्न अत्याधुनिक वंशाणु प्रयोगशाला अर्थात जेनेटिक ल्याब नेपालमा आगामी वैशाखबाट सुरु हुने भएको छ । वीर अस्पतालले करिब सवा दुई करोड रुपैय...
सिंहदरबारमा फेसबुक निषेध!
काठमाडौं,चैत १८ । सेवाग्राहीका काम गर्ने कार्यालय समयमा अधिकांश कर्मचारी सामाजिक सञ्जालमा झुलिए के हुन्छ? त्यो पनि अन्यत्र होइन, देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंदरबारमा । प्रस्ष्ट छ – काममा ढिलासु...
एसएलसी परिक्षा सुरु, परिक्षार्थीलाई सफलताको शुभकामना
१८ चैत, काठमाडौं । यस वर्षको प्रवेशिका परिक्षा एसएलसी बिहान ८ बजेदेखि देशैभर एकसाथ सुरु हुँदै छ । परीक्षामा देशभरबाट कुल ६ लाख १५ हजार ५ सय ५३ जना परिक्षार्थी सामेल हुने परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय...
काठमाडौं,चैत १६ । एस.एल.सी.परिक्षा आउन एक दिन मात्र बाँकी रहँदा शिक्षा मन्त्रालय,शिक्षा विभाग,जिल्ला शिक्षा कार्यालय र निजीविद्यालयको मिलेमतोमा परिक्षा केन्द्र किन्ने होड तिब्र बनेको छ । निजीविद्यालय...
झपा,चैत १६ । चैत १८ गतेदेखि सुरु हुन लागेको यस बर्षको प्रबेशिका परीक्षा (एसएलसी) मा अरुको तर्फबाट परीक्षा दिएको पाइए रु एक लाखसम्म जरिवाना हुने भएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापाले बिर्तामोडमा आयोज...
एसएलसी दिने विद्यार्थीलाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले दियो ठूलो मौका !
काठमाडौँ, १५ चैत । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षामा संलग्न परीक्षार्थीले व्यक्तिगत विवरण सच्याउनुपर्ने भएमा परीक्षा केन्द्रमै आवेदन दिन सक्ने भएका छन् । पहिलो पटक गरिएको सोव्य...
सुदूरपश्चिमका १५ सय ८७ विद्यार्थी एसएलसी दिन नपाउने
पप्पु गुरुङ्, १५ चैत्र / कञ्चनपुर । एसएलसी परिक्षाको लागी आवेदन फारम भरेका सुदुरपश्चिमका १७ सय ८७ बिद्यार्थीहरु परिक्षा दिनबाट बन्चित हुने भएका छन् बिद्यालयमा ७५ प्रतिशत हाजिरी नभएका र समयमै राजस्व अ...
प्रवेशिका परीक्षामा सुदूरपश्चिमबाट ७२ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुने
पप्पु गुरुङ्, १५ चैत्र / कञ्चनपुर । यस बर्षको एसएलसी प्रवेशिका परीक्षामा सुदूरपश्चिम बाट ७२ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुने भएका छन् । चैत्र १८ गते सुरु हुने परीक्षामा सुदूरपश्चिमका ७२ हजार २ सय...
भक्तपुर,चैत १४ । परिक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद काप्रीले यस वर्षदेखि प्रवेशिका परिक्षामा लागू हुने लेटर गे्रडिङ प्रणाली अर्थात अक्षारांक पद्धतिबारेमा भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको छ । रफत सञ्चार क्लवमा...
नक्कली चिकित्सक :१३ पटक परीक्षा दिँदा पनि अनुत्तीर्ण
१४ चैत, काठमाडौं । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी भएको आरोपमा थप २ चिकित्सक पक्राउ परेका छन्। दुवै जना अभियुक्त नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको परीक्षामा १३ पटकसम्म अनुत्तीर्ण भएको पाइएको छ। कारोबार...
आयो कृषि घर मोवाइ एप्स
१२ चैत, काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालयले किसानहरुले कृषिसम्बन्धी समग्र विषयमा कृषिविज्ञहरुबाट जानकारी लिन सक्ने गरी कृषि घर नामक मोवाइ एप्स संचालनमा ल्याएको छ । सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा शुक्रबार ...
Posted on May 02, 2016 | views: 903
१२ चैत, काठमाडौ । विश्वभरीका महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजकि गर्ने बेभसाईट विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो दस्तावेजमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाको समेत चर्चा गरिएको छ । धमलाले अक्टो...
११ चैत, काठमाडौं । नेपालमा जन्मेका गौतम बुद्धलाई भारतमा जन्मेको भन्दै झुठको खेती गरिरहेको भारत र त्यहाँका बुज्रुकहरुको नियत फेरी एकपटक छलंगं भएको छ । गौतमबुद्ध भारतमा जन्मेको भन्दै नक्कली लुम्बिनी...
सरकारी सहित अन्य वेवसाइट ह्याक गर्ने पक्राउ
१० चैत, काठमाडौं । सरकारी कार्यालयको आधिकारीक वेवसाइट सहित विभिन्न संघसंस्थाको वेवसाइट ह्याक गर्दै आएका एक युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अुनसार राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र र घरेलु तथा स...
एमालेले पुस्तक पनि व्यवस्थित बनाउन सकेन
९ चैत, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयका करिब २० हजार पूस्तक अलपत्र बनेका छन् । अलपत्र पारिएका पुस्तकमा भूमिगतकालदेखि संकलित विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास, दर्शन, संस्कृ...